Howlgalo dad iyo hub lagu soo qabtay oo ciidamada amniga ka fuliyeen qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho
Howlgalo ay saaka ka sameeyeen qeybo kamid ah degmada Hodon ee gobolka Banadir ciidamada dowlada Soomaaliya ayaa lagu soo qabqabtay dad iyo hub kala duwan.
Dadka la soo qabqabtay oo la sheegay in ay tiradoodu kor dhaafaysay 340 ruux ayaa lixdan ka mid ah haatan weli ku sii jira xarumaha ay ciidamadu ku leeyihiin magaalada Muqdisho iyadoo baaritaano lagu samaynayo.
Taliyaha ciidamada Booliska gobolka Banaadir Col. Axmed Xasan Maalin, taliyaha hay’adda dambi baarista CID Col. C/llaahi Xasan Bariise iyo Guddoomiyaha degmada Hodon Cabdi Max’ed Warsamse “Dhabarey” oo maanta shir jaraa’id ku qabtay Muqdisho ayaa ka warbixiyey dadka lasoo xiray iyo hubka ay soo qabteen.
“Ciidanka booliska iyo ciidanka nabad sugidda saaka salaada subax markii la tukaday ayaa waxey howlgal ka bilaabeen degamada Hodon, waxaa la soo qabtay alaabtaan aad arkeysaan iyo dad gaaraya 364 qof ah, dadkii waa la baaray waxaa noo soo hartay 60 qof oo ah Shabaab iyagana la sii baarayo” ayuu warbaahinta u sheegay Col. Maalin.
Ciidamada dowlada ayaa mar walba waxa ay ka fuliyaan magaalada Muqdisho baaritaano la xiriira sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen dadka ka dambeeya weeraro qaraxyo ah iyo dilal ka dhaca qeybo kamid ah magaalada Muqdisho.